ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်ရေး Rotary Actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > Rotary လျှပ်စစ် Actuator > ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်ရေး Rotary Actuator
ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်ရေး Rotary Actuator
AOX-မေး စီးရီး ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု rotတစ်ဦးry တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် အထူး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ တစ်ဦး လွှဲ တစ်ဦးngle rတစ်ဦးnging အကြား 90°တစ်ဦးnd 270Â°, ထိုကဲ့သို့သော တစ်ဦးs လိပ်ပြာ vတစ်ဦးlves, bတစ်ဦးll vတစ်ဦးlves.AOX တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r တွေ့ဆုံ internတစ်ဦးtionတစ်ဦးl stတစ်ဦးndတစ်ဦးrds တစ်ဦးnd ဖြစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့် အဆိုပါ တစ်ဦးim ၏ မြင့်သော reliတစ်ဦးbility တစ်ဦးnd ရှည်လျားသော ဝန်ဆောင်မှု အသက် - ကြိုးစားနေ သို့ minimize mတစ်ဦးintenတစ်ဦးnce လိုအပ်ချက်များ။ AOX အကောင်အထည်ဖေါ် guတစ်ဦးrတစ်ဦးntee sတစ်ဦးfe တစ်ဦးnd reliတစ်ဦးble ဝန်ဆောင်မှုs အောက် vတစ်ဦးrious အစွန်းရောက် environmentတစ်ဦးl အခွအေန။
AOX-မေးစီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှု rotary actuator များအတွက် 3. Worm ဂီယာ: Precision machine နှစ်ဆတီကောင်ဂီယာနိမ့်ဆူညံသံမြင့်မား output ကို torque ။
AOX-မေးစီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှု rotary actuator များအတွက် 4. လက်စွဲစာအုပ်အပေါ်မှထပ်:
1997 ခုနှစ်မှစ. ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနည်းပညာ R & D စင်တာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည် R & D ကိုဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်အရင်းအမြစ်များအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံ, စတာတွေက high-tech ခွက်ကောလိပ်များနှင့်သုတေသနဌာနတို့အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, အဆင့်မြင့်ကိရိယာများကိုမိတ်ဆက်မိတ်ဆက်
ပြည်တွင်းတွင်တီထွင်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုလေးစားအပေါ်ထားရှိတန်ဖိုးနှင့်အတူ, AOX ၏ R & D အဖွဲ့သည်လုံးဝ 96 အမျိုးသားရေးမူပိုင်ခွင့်ရရှိထားခဲ့ပါသည်။ ကျနော်တို့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုအာရုံစိုက်ဖို့ဆက်လက်မြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးမြင့်စံချိန်စံညွှန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မား AOX-မေးစီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှု rotary actuator ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
ပိုကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ AOX-မေးစီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှု rotary actuator ဖော်ပြရန်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏လူကြိုက်များမြှင့်တင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတက်ကြွစွာဂျာမဏီ Valve လောက, AHEMA, ရုရှား PCV ကုန်စည်ပြပွဲ, ECWATCH, မလေးရှား ASIA မှရေအတွက်, အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာအဓိကပြပွဲများတွင်ပါဝင် ထိုင်း THAIWATER, အင်ဒိုနီးရှား Indowater, ရှန်ဟိုင်း Flowtech, etc.You သမျှသောဤပြပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။
မေး: ဘယ်လောက်ကြာငါ AOX-မေးစီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှု rotary actuator ရဲ့နမူနာရဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်သလဲ
မေး: AOX-မေးစီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှု rotary actuator မှာဘယ်လိုနေသလဲ?
hot Tags:: ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်ရေး Rotary Actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်